မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: အဝေးကအဖြူရောင်ချစ်ခြင်းများစွာနှင့်…
ရာသီတွေပြောင်း ရက်တွေဟောင်းလို့ အချစ်ဟောင်းတွေ များတဲ့ နင်ရယ် ဝေဒနာဟောင်းတွေ အတိတ်ဟောင်းမှာပဲ ထားစေချင်တယ်။ လာမဲ့နှစ်သစ် စိတ်ကူးလူသစ် အကြင်နာသစ်နဲ့ ပျော်စေချင်တယ် နင့်အတွက် ငါက အဝေးကနေပဲ တောင်းဆုအစဉ်ကွယ်။
December 29, 2007 at 6:38 AM
နှစ်သစ်မှာ စိတ်ကူးအသစ်၊ အတွေးအသစ်နဲ့ လိုရာပန်းတိုင်း ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေဗျာ
he isagay, not more than that. dont waste your time.
2007 အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဒေါ့ အိုအာဂျီဒိုမိန်းနဲ့ ဘလော့တွေမှာ ကွန့်မန့် ရေး...
ဆေးကောင်းတစ်ခွက်လား အဆိပ်ခွက်လား … တဲ့